UTim Cook uqinisekisa ukuba iApple Pay ngeyidlulile kumthamo wentengiselwano wePayPal | IPhone iindaba
Apple Pay Isinye sezihloko eziphambili zeengxoxo ngexesha le- Abanini zabelo ntlanganiso yekota yesithathu yezoqoqosho kaApple. Inkonzo eya kuba ukutya umhlaba ngokukhawuleza kwi-PayPal, Enye yeenkonzo zentlawulo yedijithali eyaziwa kakhulu kwihlabathi. Kwaye ibadla umhlaba ngenani labasebenzisi kunye nokuthengiselana. Emva kokutsiba sikuxelela ngakumbi ngale mfazwe ye-hegemony yeetransekshini zoqoqosho lwedijithali.
Njengoko sikuxelele, UTim Cook wayefuna ukuthelekisa iApple Pay kunye nePayPal, kwaye ewe kukho ukufana kodwa ziinkonzo ezinamanqaku ahlukeneyo. I-Apple Pay iphumelele inani elikhulu lezentengiselwano kune-PayPal (baphumelele i-1 yezigidigidi zentengiselwano ngenyanga ngobukho kwiimarike ezingama-47), kodwa inyani yile I-PayPal ayinqweneli ukuba ibe yile "digital wallet" yedijithali yemihla yethu yemihla ngemihla, ijolise ikakhulu kwintengiselwano nge-intanethi. I-Apple Pay nayo, kodwa ngokokubona kwam into enye ayinanto yakwenza nenye.
Ngokusekwe ekusebenzeni kwekota kaJuni, iApple Pay ngoku yongeza abasebenzisi abatsha ngaphezulu kwePayPal, kwaye umthamo wentengiselwano yenyanga ukhula amatyeli amane ngokukhawuleza.
UTim Cook naye wayefuna ukucacisa ukukhula ngokukhawuleza kweApple Pay kwiinkqubo zothutho kwihlabathi liphela. Inkonzo ngoku ikwinkqubo yokuhamba ye Portland, Kwaye uCook uphinde wathi uApple uqalile ukukhuphela inkqubo yezothutho ENew York.
E-United States, ukongeza kwindibaniselwano ephumeleleyo kwinkqubo yezothutho ePortland ngoMeyi, siqale ukuthunyelwa kwezothutho kwiSixeko saseNew York kwaye sizakuyivula eChicago ekuhambeni konyaka. E-China, i-Apple Pay yasungula ikhadi lokuhlawula i-Didi, umboneleli omkhulu wezothutho emhlabeni.
Njengoko besenditshilo ngaphambili, ukuhlanganiswa kwezothutho kungumqhubi ophambili wokwamkelwa kweekhwama zedijithali, kwaye sizakugcina lo mzuzu ukunceda abasebenzisi bashiye isipaji sabo ekhaya kwezinye iimeko.
Siza kubona ukwamkelwa kweKhadi le-Apple elitsha, iya kuphehlelelwa ngenyanga ka-Agasti kwaye ngokungathandabuzekiyo iya kuba yeyokuqala kwi-Apple Pay. Oko kunye nokukhula kwiinkqubo zothutho kusikhokelela kumbuzo: ngubani ofuna ukuqhubeka enamakhadi omzimba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Pay » UTim Cook uqinisekisa ukuba iApple Pay ngeyidlulile kumthamo wentengiselwano wePayPal
Iibhola zam, kwaye akukho mpheki uyayikholelwa le nto, kulula ukuyitsho ukuba intlawulo yeapile kunye nepaypal zikhona
ukuba le yindlela yakho entsha yentengiso, awuphumelelanga mr tim
Zinjalo ke iziphumo ze-Q3 yeApple. Iinkonzo zifikelela kumaxesha onke
U-Apple ujoyina iProjekthi yokuDluliswa kweDatha ngeTwitter, Facebook nakuGoogle